Macaamiisha ayaa Sue Samsung u cusbooneysiin la'aan ah | Androidsis
Macaamiisha ayaa Samsung ka dacweeya Samsung cusbooneysiin la'aan
Samsung waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan xagga tirada iyo tayada boosteejooyinka moobiilka ee suuqa Android. Si kastaba ha noqotee, bilihii la soo dhaafay ma aysan helin natiijooyinka ugu fiican iyo, laga yaabee si sax ah taas awgeed, waxay beddeleen istiraatiijiyaddii ay ku bixin jireen boqolaal taleefanno isla waqti isku mid ah suuqyo isku mid ah. Waxay umuuqataa in lagu dhex lumay magacyada mobilada Samsung ay dhamaatay, in kastoo hada go, aankooda ugu horeeya uu qaadanayo culeyskooda. Isticmaalayaashu way ka dheregsan yihiin inta badan taleefannada casriga ah ee aan helin cusbooneysiinta Android.
Si ka duwan terminaalka saafiga ah ee Android, sida Nexus, taleefannada Samsung si loogu cusbooneysiiyo noocyada cusub ee Android wuxuu maraa gacmaha Kuuriya kahor intaan la helin hagaajinta UI caadada ah Waxay u adeegsadaan sidii lakab dheeraad ah nidaamka qalliinka. Samsung waxay ku sameysaa kaliya dusha sare, waxayna ka tagtaa dhammaan kuwa lagu helo qiimo ka jaban ama ka jaban qalabkooda. Laakiin hadda wuxuu arki doonaa dadkaas adeegsadayaasha ah maadaama ay si rasmi ah looga dacweeyay dhibaatada ay u geystaan.
Gaar ahaan, dalabku wuxuu ka yimaadaa Ururka Macaamiisha Holland, ururka macaamiisha ee Nederland. Iyaga ayaa ah kuwa maxkamada Korea geeyay sababta ay ku doodayaanna waxay tahay in labadii sano ee ugu dambeysay wax kayar 82% aaladaha mobilada lagu casriyeeyay suuqa. Taasi waxay ka dhigan tahay in kuwa ugu badan ee ku sharad ku leh astaanta laga tagay iyaga oo aan cusbooneysiin. Sideed u aragtaa waxqabadka Ma ka mid tahay kuwa ku raacsan kuwa keenay dacwaddan ka dhanka ah Samsung mise wey buun-buuninayaan? Waxaan u maleynayaa inay sax yihiin, runtiina, waxaan u maleynayaa inay ku dambayn doonaan iyada oo maxkamadda la geeyo qayb ahaan. Waan arki doonaa jawaabta Samsung ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Macaamiisha ayaa Samsung ka dacweeya Samsung cusbooneysiin la'aan
Kenni Barsalobre dijo
waa wax aan micno lahayn; Haddii aadan ku faraxsanayn wax soo saar si fudud waad u joojin kartaa iibsashadiisa, kuma khasbayaan inaad wax qabato.
Ujawaab Kenni Barsalobre
Waxaad leedahay waa doqon. Markay shirkadaha iibiyaan taleefan waxaa waajib ku ah macmiilka waxaanan u maleynayaa inay wax weyn tahay inay bilaabaan inay u qaadaan maxkamad si ay u joojiyaan xadgudubkooda. Duugnimo la qorsheeyey waa khiyaamo.
Ku jawaab Mike
Daanyeel B dijo
Sida iska cad ma arkaysid dhinaca kale ee lacagta, Samsung way awoodi kartaa inay qeexdo muddada cusbooneysiinta ay rabto iyada oo ku saleysan hadday tahay mid sare ama mid dhexdhexaad ah, ma arko sababta ay u sameynayaan noocan oo kale haddii tusaale ahaan s6 in horeyba ay 2 sano u jirtay oo lagu sii waday Nougat, haddii aad intaas ka badan rabto waxaad aadi kartaa macruufka ama Nexus ama Pixel, waxa aad ka leedahay ku xadgudubka macaamilka waa hagaagsan tahay laakiin haddii aad filayso in ra'iisul wasaarahaagu uu haysto 4 sano cusbooneysiinta waxaan u maleynayaa inaad aad u qaldan tahay ✌
Jawaab Daniel B
Alesander lopez dijo
Waa hagaag, waxay ila tahay in runtu ay sax tahay waanan ku raacsanahay Kenni maxaa yeelay Samsung maanta waxay kuu iibineysaa taleefan 800 euro ah, sanadka soo socda waxaad heleysaa daboolkiisa xiga ee xigtada ah iyo taleefankaagii hore ama cusbooneysiinta ayaa in badan dib u dhacday. waa mid waqtigiisa ilaaliya ama aan soo bixin oo waxaa lagugu qasbayaa inaad u adeegsatid Custom Roms si aad u sii wadato haysashada noocyada cusub ee Android ee adeegsiga gabow-galka ee loogu talagalay qaab khiyaano leh, waxaa iska cad inaysan danaynayn si macaamiisha ay u awoodaan cusbooneysii markale mobilka.
Laga yaabee in badankood waxay umuuqdaan dibi dhac, laakiin mid ka mid ah waxyaalaha yar ee maanta arkaa ayaa ah in noocyada Android ay leeyihiin cilladaha amniga iyo in habka loo saxo ay la socoto jajabyada ku yimaada qaabka cusbooneysiinta, kaliya maahan inaad sameyso noqo horumar ama shaqooyin cusub oo badeecada ah, maxaa yeelay maanta waxaan hayaa taleefan wata hal sano kuma dhiiran karo inaan galo Wifi kasta oo furan maxaa yeelay waxaan ogahay in mobilka uu gebi ahaanba u nugul yahay cilladaha amniga ee kala duwan GORDAS iyo LG ma siideyso wixii ku soo kordha ku xalli mid ka mid ah kuwii hore ee ugu sarreeya.
Taasi haddii aysan sii socon doonin siinta taageerada in gebi ahaanba la sii daayo koodhku si bulshadu u hubiso in mashruucu uusan ku dhiman hilmaanka sida shirkadaha kale u sameeyaan halkii ay ka xannibi lahaayeen bootloader-ka.
Qaabkan fikirka hadda laga yaabo in aan wax badan la arkin laakiin mustaqbalka dadku waxay ku baraarugi doonaan markay dooranayaan taleefan waxaana rajeyneynaa inuu dhowaan iman doono si shirkadaha waaweyn sida Samsung, LG iyo noocyo kale ay u joojiyaan dilka Android.
Waxaan haystay HTC, Samsung iyo LG iyo gabagabada aan sawiray waxay tahay in taleefoonkayga gacanta ee soo socda uu noqonayo mid Nexus ah si loo hubiyo in cusbooneysiintu ay aniga ila soo gaadhay iyo in aysan sannad imanayn ama iPhone loogu talagalay isla sabab.
Rikoodh ahaan, aad baan u ahay taageere Android waxaanan marwalba dhiirigeliyey isticmaalka Android halkii aan ka isticmaali lahaa iPhone laakiin waxaan horeba uga daalay aragtida sida taleefannadayda looga tago ama aan ula xiriiro caadooyinka ROM-ka.
Jawaab Alesander López
Juan Antonio Gallardo sawir-haye dijo
Waa wax aad u raaxo leh in la akhriyo faalladaada. Xaqiiqdii waxaad tahay qof caqli badan macnaha falanqaynta ujeeddadaada. Waxaan ahaa isticmaale isticmaalaha Android oo ay qasabtay shirkad taleefankeyga ah oo aanan rabin inaan wax badan ku bixiyo. Waxaan arkay cusboonaysiinta iyo hagaajinta indhahayga hortooda. Waxaan u wareegay iphone maalin aan lacag ku hubeysnaa. Qaabka ayaa ah 4-ta oo wali wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka hadda jira. Waxaan jeclaan lahaa in macruufka aan la xaddidin, maxaa yeelay waxaa jira taleefannada gacanta oo aad u fiican mararka qaarkoodna isla qaabkii ayaa igu caajisa. Salaan.
Jawaab Juan Juan Gallardo
Kike gregori dijo
Nacho dhawaqani ma kuu wanaagsan yahay ?????????????????????????
Ku jawaab Kike Gregori
Haa mudane dhibic wanaagsan
Jawaab Julderth Alberto
Sawirro cusub oo Samsung Galaxy S7 ah iyo macluumaad ku saabsan baytarigiisa ayaa la sifeeyey
A-aasaasaha Xiaomi wuxuu ku tusayaa tayada sawirka MI 5 dhowr sawir